သင့် Friends ထဲမှာ ဆယ်တန်းကျတဲ့ သူတွေရှိလောက်မယ်ထင်ရင် ဒီပို့လေးကို ရှဲဖြစ်အောင် ရှဲပေးလိုက်ပါနော်.. သူတို့ကိုတွေ့စေချင်လို့ပါ။ - APANNPYAY
Home / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / ရယ်စရာများ / သင့် Friends ထဲမှာ ဆယ်တန်းကျတဲ့ သူတွေရှိလောက်မယ်ထင်ရင် ဒီပို့လေးကို ရှဲဖြစ်အောင် ရှဲပေးလိုက်ပါနော်.. သူတို့ကိုတွေ့စေချင်လို့ပါ။
သင့် Friends ထဲမှာ ဆယ်တန်းကျတဲ့ သူတွေရှိလောက်မယ်ထင်ရင် ဒီပို့လေးကို ရှဲဖြစ်အောင် ရှဲပေးလိုက်ပါနော်.. သူတို့ကိုတွေ့စေချင်လို့ပါ။
Apann Pyay 11:36 PM ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ , ရယ်စရာများ Edit
၁၀ တန်း ကျ တာ လား ___ ???
၁၀ တန်းကျတဲ့ ညီတို့ ညီမတို့ရှိရင် ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်သွားလိုက်ဘာာ ;-) ;-)
အဆုံးထိ ဖတ်ပေးပါ... ☺☺
၁၀ တန်းကျတာ မကောင်းပါဘူး...
ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ မျက်နှာငယ်ရတယ် မဟုတ်လား... 😩😩
👆👆👆 ဒါပဲလေကွာ... 😅😅😅
၁၀တန်း ကျလို့မင်းဆုံးရှုံးခဲ့တာဆိုလို့ အပေါ်က ဟာ တွေပဲရှိမှာ(အကြမ်းဖျင်းပေါ့)
မင့် ၁၀ တန်းအတွက် အများကြီး
စိတ်ဓာတ်ကျစရာ မလိုဘူး... 😉😉
၁၀ တန်း ၁နှစ် ကျတာက မင်းဘဝတစ်ခုလုံကို မြေလှန်မပစ်နိုင်ဘူး... 😅
အချိန်လေး ၁ နှစ် ဆုံးရှုံးသွားတာကို ဘဝတခု ပြောင်းလဲ သွားသလိုဖစ်နေတဲ့ မင့်မိဘ သိအောင်ရှင်းပြလို့ မြဘူး ( မရရင် မရှင်းပြနဲ့ပေါ့ကွာာ😌) ၊
မင့် သူငယ်ချင်း နားလည်အောင် ပြောပြလို့မြဘူး ( မရရင် $နားလည်အောင် မပြောပြနဲ့တော့ပေါ့ကွာာ😌) သူတို့ပြောလာရင် ပြုံးပြုံး လေးပဲ နေပေးလိုက်!
မဲ့ပြုံးတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ငါ ယူတို့တွေကို စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်.... ဆိုတဲ့ စိန်ခေါ်ပြုံး😌😌
နေပါဦး... မင်းက ဒီနှစ်အောင်၊ ငါက ဒီနှစ်ကျခဲ့လို့ မင်းနိုင်သွားတယ်ထင်နေလား ??
Repeater တွေdမထွက်ရဘူးဆိုတဲ့ law မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိလို့လား 😂😂
Repeater တွေ အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်တွေ ဝင်ခွင့် မရဘူးလို့ မင့်ယောက္ခမ က သတ်မှတ်ထားလား....
အမှန်ဆိုရင် ကျတာက positive ဘက်က ကျိရင် အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီး ရှိတယ်ကွ...!
မင်းဖြေခဲ့တဲ့ ဟာကို မင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်
သေချာတယ်၊ မင့် အမှတ် ၃၀၀ ဝန်းကျင်ထက်မပိုဘူး... 😏😏😏
အမှတ်နဲနဲကွာာ... ဘာလုပ်မှာလဲ၊ အောင်မယ့် အောင် သူများတွေထက်သာတဲ့ အမှတ်နဲ့ မင်းအောင်လိုက်စမ်းဘာ 😅😅...
မင်း ၁၀ တန်းကျတာကို ကံကောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်၊
God က မင်းအတွက် အမှတ်တွေ ပုံပေးချင်လို့ အကွက်ရွှေ့ခဲ့တာ ဟ..
ဒါကို မင်းနားလည်ထားလိုက်...။ ☺☺
ခု လိုကျဝါးတဲ့ အတွက်... မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်အလုံး ကို ကြိုက်ရာ တက်ရောက်နိုင်ဖို့ မင့် အခွင့်အရေးတခု ထပ်ရဘီ...။
မင့် uni ဒီနှစ် မတက်လိုက်ရတာ စိတ် မကောင်းဖြစ် စရာ မဟုတ်ဘူး...
ပျော်စရာ ဟ... ပျောစရာ...
မင့် ခု uni တက်နေတဲ့ အကိုတွေ အမ တွေ လိုက်မေးကြည့်... uni တက်ရတာ ပျော်စရာကြီးလား လို့ သွားမေး... 😁😁
တကယ်ကွာာ... ငါ့ညီ၊ အကို ၁၀ တန်းနှစ်နဲ့ uni ဘဝ ဆိုရင် အကို ၁၀ တန်းနှစ်မှာပဲ အကို စွန်းပျော်ခဲ့တာ၊ အကိုတင် မဟုတ်ပါဘူး၊ အကို့ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ဒီလိုပဲ့... အာ့ကို မင့် တနေ့နားလည်လာလိမ့်မယ်၊ နောက်တနှစ် တက်ရမှာ ကို မင့် ကြိတ် ဝမ်းသာလိုက်... 😝😝
မင်းသိတဲ့တိုင်း...၊ နောက်နှစ်က အန်းထရင့် ဆိုလား၊ အန်းထရန့် ဆိုလား...၊ ဘာလား အာ့ကြီးရှိမယ် ကြားတယ် ငါ့ညီ... မင့် ခု အောင်သွားတဲ့ မင်းဖန့်တွေ မရလိုက်တဲ့ အခွင့်အရေး ကို မင်းတျောက်ပဲ ကံထူးခွင့် ရှိမှာ.... အကို ကတော့ congraxzzz ကွာာ 😉😉😉 😜😜
ဟောာ... ခုလေးတင် result တွေကြားရတာက #အထူးဝမ်းသာစရာ
အကိုတို့ လမ်းထိပ်ကစတိုး ဆိုင်က ၁ ယောက်ပေါ့... သူမနှစ်က ၁၀ တန်း ကျခဲ့တာလေ... 😒...
ခု ၃ ဘာသာနဲ့ အောင် လို့...တဲ့ ငါ့ညီ
အကိုတကယ် ပြောတာ.. မင့်ကွာာာ၊ ဘယ်လောက်ပျော်ဖို့ကောင်းလဲ... ဟို နှစ်ကသာာ သုအောင်ခဲ့ရင်... 300 ဝန်းကျင်နဲ့ပဲ သွားမှာ၊
သူ့မိဘတွေကလဲ သူ့သမီး အတွက်_ အရမ်းဂုဏ်ယူနေကြမှာ ကွ..
အကို တောင် အပျော်တွေ ကူးစက် လာသလိုပဲ မနှစ်က ရိုးရိုးနဲ့ အောင်ခဲ့ရင်တောင် သူတို့
တွေ့လား ငါ့ညီ၊ ဒါအနီးစပ် ဆုံး သာဓက အဖြစ်ပဲ...
ဒီနှစ်မှ မဟုတ်ဘူးကွ ၊ အရင် တွေ ကလဲ repeater တွေ တော်တော် ဝုန်းကြတယ် ကွ...😅😅
ငါ့ညီ၊ အကို ပြောချင်ကတော့...
ဘာမဟုတ်တဲ့၊ အချိန် တနှစ်အတွက် မတမ်းတနေတော့ပဲ...၊ နောက်နှစ် မင်း ပျော်နိုင်ဖို့ အတွက် မင်း ခုကစပြီး စာကြိုးစား လိုက်ပါ...
၁၀ တနျး ကြ တာ လား ___ ???
၁၀ တနျးကတြဲ့ ညီတို့ ညီမတို့ရှိရငျ ဖတျဖွဈအောငျ ဖတျသှားလိုကျဘာာ ;-) ;-)
အဆုံးထိ ဖတျပေးပါ... ☺☺
၁၀ တနျးကတြာ မကောငျးပါဘူး...
ပတျဝနျးကငျြမှာလဲ မကျြနှာငယျရတယျ မဟုတျလား... 😩😩
👆👆👆 ဒါပဲလကှော... 😅😅😅
၁ဝတနျး ကလြို့မငျးဆုံးရှုံးခဲ့တာဆိုလို့ အပျေါက ဟာ တှပေဲရှိမှာ(အကွမျးဖငျြးပေါ့)
မငျ့ ၁၀ တနျးအတှကျ အမြားကွီး
စိတျဓာတျကစြရာ မလိုဘူး... 😉😉
၁၀ တနျး ၁နှဈ ကတြာက မငျးဘဝတဈခုလုံကို မွလှေနျမပဈနိုငျဘူး... 😅
အခြိနျလေး ၁ နှဈ ဆုံးရှုံးသှားတာကို ဘဝတခု ပွောငျးလဲ သှားသလိုဖဈနတေဲ့ မငျ့မိဘ သိအောငျရှငျးပွလို့ မွဘူး ( မရရငျ မရှငျးပွနဲ့ပေါ့ကှာာ😌) ၊
မငျ့ သူငယျခငျြး နားလညျအောငျ ပွောပွလို့မွဘူး ( မရရငျ $နားလညျအောငျ မပွောပွနဲ့တော့ပေါ့ကှာာ😌) သူတို့ပွောလာရငျ ပွုံးပွုံး လေးပဲ နပေေးလိုကျ!
မဲ့ပွုံးတော့ မဟုတျဘူး၊ ငါ ယူတို့တှကေို စိနျချေါလိုကျပါတယျ.... ဆိုတဲ့ စိနျချေါပွုံး😌😌
နပေါဦး... မငျးက ဒီနှဈအောငျ၊ ငါက ဒီနှဈကခြဲ့လို့ မငျးနိုငျသှားတယျထငျနလေား ??
Repeater တှေdမထှကျရဘူးဆိုတဲ့ law မွနျမာနိုငျငံမှာ ရှိလို့လား 😂😂
Repeater တှေ အဆငျ့မွငျ့တက်ကသိုလျတှေ ဝငျခှငျ့ မရဘူးလို့ မငျ့ယောက်ခမ က သတျမှတျထားလား....
အမှနျဆိုရငျ ကတြာက positive ဘကျက ကြိရငျ အကြိုးကြေးဇူးတှေ အမြားကွီး ရှိတယျကှ...!
မငျးဖွခေဲ့တဲ့ ဟာကို မငျးပွနျစဉျးစားကွညျ့
သခြောတယျ၊ မငျ့ အမှတျ ၃၀၀ ဝနျးကငျြထကျမပိုဘူး... 😏😏😏
အမှတျနဲနဲကှာာ... ဘာလုပျမှာလဲ၊ အောငျမယျ့ အောငျ သူမြားတှထေကျသာတဲ့ အမှတျနဲ့ မငျးအောငျလိုကျစမျးဘာ 😅😅...
မငျး ၁၀ တနျးကတြာကို ကံကောငျးတယျလို့မှတျလိုကျ၊
God က မငျးအတှကျ အမှတျတှေ ပုံပေးခငျြလို့ အကှကျရှခေဲ့တာ ဟ..
ဒါကို မငျးနားလညျထားလိုကျ...။ ☺☺
ခု လိုကဝြါးတဲ့ အတှကျ... မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ တက်ကသိုလျအလုံး ကို ကွိုကျရာ တကျရောကျနိုငျဖို့ မငျ့ အခှငျ့အရေးတခု ထပျရဘီ...။
မငျ့ uni ဒီနှဈ မတကျလိုကျရတာ စိတျ မကောငျးဖွဈ စရာ မဟုတျဘူး...
ပြျောစရာ ဟ... ပြောစရာ...
မငျ့ ခု uni တကျနတေဲ့ အကိုတှေ အမ တှေ လိုကျမေးကွညျ့... uni တကျရတာ ပြျောစရာကွီးလား လို့ သှားမေး... 😁😁
တကယျကှာာ... ငါ့ညီ၊ အကို ၁၀ တနျးနှဈနဲ့ uni ဘဝ ဆိုရငျ အကို ၁၀ တနျးနှဈမှာပဲ အကို စှနျးပြျောခဲ့တာ၊ အကိုတငျ မဟုတျပါဘူး၊ အကို့ သူငယျခငျြးတှလေဲ ဒီလိုပဲ့... အာ့ကို မငျ့ တနနေ့ားလညျလာလိမျ့မယျ၊ နောကျတနှဈ တကျရမှာ ကို မငျ့ ကွိတျ ဝမျးသာလိုကျ... 😝😝
မငျးသိတဲ့တိုငျး...၊ နောကျနှဈက အနျးထရငျ့ ဆိုလား၊ အနျးထရနျ့ ဆိုလား...၊ ဘာလား အာ့ကွီးရှိမယျ ကွားတယျ ငါ့ညီ... မငျ့ ခု အောငျသှားတဲ့ မငျးဖနျ့တှေ မရလိုကျတဲ့ အခှငျ့အရေး ကို မငျးတြောကျပဲ ကံထူးခှငျ့ ရှိမှာ.... အကို ကတော့ congraxzzz ကှာာ 😉😉😉 😜😜
ဟောာ... ခုလေးတငျ result တှကွေားရတာက #အထူးဝမျးသာစရာ
အကိုတို့ လမျးထိပျကစတိုး ဆိုငျက ၁ ယောကျပေါ့... သူမနှဈက ၁၀ တနျး ကခြဲ့တာလေ... 😒...
ခု ၃ ဘာသာနဲ့ အောငျ လို့...တဲ့ ငါ့ညီ
အကိုတကယျ ပွောတာ.. မငျ့ကှာာာ၊ ဘယျလောကျပြျောဖို့ကောငျးလဲ... ဟို နှဈကသာာ သုအောငျခဲ့ရငျ... 300 ဝနျးကငျြနဲ့ပဲ သှားမှာ၊
သူ့မိဘတှကေလဲ သူ့သမီး အတှကျ_ အရမျးဂုဏျယူနကွေမှာ ကှ..
အကို တောငျ အပြျောတှေ ကူးစကျ လာသလိုပဲ မနှဈက ရိုးရိုးနဲ့ အောငျခဲ့ရငျတောငျ သူတို့
တှလေ့ား ငါ့ညီ၊ ဒါအနီးစပျ ဆုံး သာဓက အဖွဈပဲ...
ဒီနှဈမှ မဟုတျဘူးကှ ၊ အရငျ တှေ ကလဲ repeater တှေ တျောတျော ဝုနျးကွတယျ ကှ...😅😅
ငါ့ညီ၊ အကို ပွောခငျြကတော့...
ဘာမဟုတျတဲ့၊ အခြိနျ တနှဈအတှကျ မတမျးတနတေော့ပဲ...၊ နောကျနှဈ မငျး ပြျောနိုငျဖို့ အတှကျ မငျး ခုကစပွီး စာကွိုးစား လိုကျပါ...